Uma kuziwa ingane izicathulo lokuqala, abaningi ngasizathu simbe, nje ukukhumbula nezimbadada. Kodwa kunzima ukuvumelana nale sitatimende. Ingane othwala izimbadada ngesikhathi lapho uqala uzama ukuhamba. Kuze kube yileso sikhathi, imilenze yakhe ngokuvamile kuhlobisa ingane amabhuzu, okungase tabobunjwa. Uma wayefisa, ungakwazi ukuxhumanisa ngesimo izimbadada efanayo noma bengafaké zicathulo, uma ingane ihlelelwe bawahlobise ehlobo noma ekhaya, bese bethunga noboya, lapho zenzelwe nenkathi ebandayo.
Uma ingane amabhuzu sezigugile kuphela ebusika, kungcono ukwenza kubo egqinsiwe. Kulokhu, angabawa ngokuphelele esikhundleni ngisho amabhuzu ebusika. Ikakhulukazi uma thunga noma ukulingana elinama oqukethe semali izinwele, futhi engxenyeni engaphakathi senziwa obuyimvukumvuku. Ngo ezifana izicathulo imilenze ingane nakanjani sibe efudumele, ngisho noma emgwaqweni kubanda ngokwanele.
Omama abaningi abasha unesithakazelo lo mbuzo: "Indlela tie amabhuzu izingane?". imikhiqizo enjalo zihlale baningi kakhulu. Kukhona izinketho ezimbili yilezi: ungasebenzisa noma crocheted.
Ekuqaleni kuzoba okudingekile ukunquma ntambo. Ukuze ehlobo kungcono ukukhetha intambo ukotini isisekelo, ebusika - impahla uvolo. I ohlabayo le ntambo, emnene ngaphezulu ujike umkhiqizo.
Uma sikhuluma indlela tie spokes ingane amabhuzu, kukhona ezimbili angakhetha ukuzenza. Ungasebenzisa spokes ezine. Kulokhu, ingane amabhuzu etholakala kuphela umphetho phansi. Technique ukunitha kuyafana ukulandelana ukunitha amasokisi. Nokho, endaweni lapho ngokwesiko is wathungela isithende, kunomehluko obalulekile. Lapho yokukhiqiza bootees kulesigaba uzwane okuyingxenye. It is wadala e okuningi ngendlela efanayo esithendeni. Ngemva kwalokho kwenziwa izinhlangothi bese ezimise ngezinyawo.
Futhi amabhuzu zezingane ungakwazi tie spokes ezimbili. Lo mkhiqizo ngeke kube esibophezelayo ngobude yonke we emuva. Uma wayefisa, lo suture lingasetshenziswa njengoba element zokuhlobisa. Kuze kube yimanje, enqubeni kuzoba sekudingeka ukuba kubunjwe kokuhlanganisayo ekhethekile ke prodenetsya lace ekhethekile. Ukuba khona nje lacing enjalo angase kamuva lula ingane obuvanie.
Uma amabhuzu ukukhilosha, bangakwazi ukuxhunywa, ngisho ngaphandle asebenzise inaliti nentambo. Kulokhu, umsebenzi uqala kusukela ngezansi, kanye kuphela. Ngemva kwalokho kwakhiwa ezinhlangothini ezilingene uzwane.
Uma isizinda usulungile, kubalulekile ukwenza yomhlobiso wawo. Ngenxa yalesi ukusetshenziswa injongo kungaba kudabuke satin eqine ezahlukene. Ungakwazi ukuhlela kwabo ngesimo izilwane kancane funny. Uma amabhuzu senzelwe intombazanyana, ungasebenzisa ubuhlalu - ngiyibeke phezu onqenqemeni umkhiqizo osuphelile. Ekuqaleni uyobheka iphethini enhle kumiswa ubuhlalu emibalabala.
Kafushane, umhlobiso bootees - kuba ithuba lokubonisa umcabango emangalisayo futhi khombisa emakhono abo kwelinye noma olunye uhlobo ngenalithi.
Izigqoko ngezandla zabo kuzo edayisa izinto. Izigqoko ukuze zomkhosi zokubhukuda. Craft Imibono
Ezindizeni Simple futhi enhle kakhulu iphepha
Ikholomu zosizo sc hook: isithombe, isicelo isiqu
Isikhafu-lic --accessory esiwusizo futhi Ukugunda kwesizini entsha
Indlela yokwenza iluphu sentambo: ingubo, amakhethini, ithawula
Kuthiwani uma kwakukhona ibala ophuzi esikrinini?
Ziyini izinzuzo kanye nokulimala amantongomane ngoba amadoda
19 Imithetho for abesifazane ukubheka abasha amahle
Indlela ukukhetha machine for manicure kanye pedicure? Umshini i-hardware manicure kanye pedicure